Akụkọ kacha mma Instagram ise nke afọ gara aga | Androidsis
N'ime otu afọ, Instagram abụrụla otu n'ime netwọkụ mmekọrịta na -ekwe nkwa. Ọ bụrụ na ị nweela ohere gị nke ọma, ụfọdụ ihe ọhụrụ jisiri ike nye ahụmịhe kachasị mma enwere ike nweta na netwọkụ mmekọrịta a nke eburu n'obi maka ịse foto.
Akụkọ gbasara Instagram abụrụla ihe kacha mma nwere ike ime na Instagram nke mere na n'ime ọnwa ole na ole ọ rụzuru Nde mmadụ 150 na -arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị nke a na -emefu ilele akụkọ kọntaktị ndị na -eso na netwọkụ mmekọrịta a ma ama. Ọ bụghị naanị na ọ na -anọ na nke a, mana enwere nkọwa ndị ọzọ anyị achọghị ileghara anya na afọ gara aga a.
1 Akụkọ banyere Instagram
2 Real oge video
3 Ọtụtụ akaụntụ
4 A na -echekwa ọkwa dị ka ọkacha mmasị
5 Ikwuchi okwu
Akụkọ banyere Instagram
Instagram depụtaghachiri oge site na Snapchat, mana o nyela ya mmetụ pụrụ iche ịkpụpụta ahụmịhe dabara mmadụ nde 150 gburugburu ụwa. Nke a ga -abụ maka ihe ma ọ dị nfe mepụta Akụkọ Akụkọ Instagram site na ama ama gị ka ndị na -eso gị wee hụ vidiyo ndị ahụ nke kacha nke sekọnd 10 ga -arụ ọrụ ruo awa 24 ka ọ ga -apụ n'anya.
Real oge video
Ndị ọzọ nke ozi ọma nke Instagram n'ime ọnwa ndị na -adịbeghị anya na nke ahụ dị iche na Facebook n'onwe ya n'ihi na vidiyo anyị na -eme na nkwanye ugwu adịchaghị. Nke a pụtara na na awa 24Dị ka Akụkọ Instagram, ha ga -apụ n'anya, yabụ na ị ga -eleba anya na usoro iheomume nke kọntaktị gị ka ị ghara ịhapụ mgbasa ozi ha ọ bụla, n'agbanyeghị na a ga -agwa ha mgbe niile.
Maka ndị njikwa obodo yana maka ndị na -abụghị, nhọrọ nke mee ka akaụntụ nke abụọ rụọ ọrụ Ọ dị mkpa karịa inwe ike ịgafe site na ọkachamara gaa na nkeonwe na ọkụ. Nkọwa nke dị oke mkpa iji zere inwe ụdị aghụghọ dị iche iche maka ihe anyị nwere kemgbe mgbanwe.
A na -echekwa ọkwa dị ka ọkacha mmasị
Ugbu a ị nwere ike nweta akwụkwọ ndị ahụ na ị masịrị ha nke ukwuu echekwara na profaịlụ gị ịlaghachikwuru ha mgbe ọ bụla ịchọrọ. Pịa akara ngosi dị n'aka nri nke mbipụta kọntaktị, a ga -echekwa ya ruo mgbe ebighi ebi na mpaghara ahụ pụrụ iche ị nwere ike ịnweta site na oghere gị na profaịlụ.
Otu n'ime ihe ndị ahụ dị mkpa maka ahụike nke usoro iheomume anyị ma chịkwaa nkwupụta ndị ahụ anyị achọghị ịhụ n'oge ọ bụla. Na netwọkụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, achọrọ ụdị ngwaọrụ a Emepụtara ya naanị ọnwa anọ gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ozi 5 kacha mma Instagram nke afọ gara aga
Ị na -akwado onye njikwa faili ka ọ na -ebufe ọdịnaya site na ebe nchekwa n'ime ka sd?
Nintendo nanị ịhapụ Fire Ememe: Ndị dike na gam akporo na February 2